Wararka Maanta – Page 254 – Filimside.net
May 23, 2018 Zakarie Abdi
Kareena Kapoor Khan waxay ka mid tahay shaqsiyaadka Bollywood-ka ugu awooda badan xiligaan sidoo kalena mudo dheer fanka ka tirsaneyd. Bebo waxay caan ku tahay inaysan ka labo labeynin fikirkeeda gaarka ah marka arin xasaasi […]
Hera Pheri 3 xiliga duubis lagu bilaabayo iyo waqtiga la daawan doono oo hordhac ahaan loo ogaaday
Raju, Shyam iyo Baburao waa sedex door oo Classic ah sidoo kalena aan marnaba la hilmaami doono waana sedexda magac oo ay Hindiya ku qabsadeen Akshay Kumar, Suniel Shetty iyo Paresh Rawal bilawgii qarningaan. Hera […]
Priyanka Chopra “Dadka reer Rohingya waxay u baahan yihiin kaalmo dhameestiran”
Atirishada caanka ah Priyanka Chopra sidoo kalena ah safiirka hay’ada qaramada midoobe UNICEF dhanka caruurta u qaabilsan ayaa booqatay dalka Bangladesh. Priyanka Chopra waxay waqti la qaadatay caruurta qowmiyada Rohingya ee Muslimiinta u badan kuwaas oo […]
Wax ka ogaaw 15-ka filim ee lacagaha ugu badan soo xareeyeen ee atirishooyin hogaamiye ka yihiin
Alia Bhatt filimkeeda Raazi ayaa dood la’aan kaalinta labaad ka galay 15-ka filim ee atirishooyin hogaamiye ka yihiin kuwaas oo lacagaha ugu badan Boxoffice-ka kasoo xareeyeen. Raazi ayaa soo xareeyay 84.50 Crore mudo 12-maalmood ah waxaana muuqato […]
Rasmi: Todobado sano kadib Sanjay Dutt oo filimkiisa ugu horeeyo maal galinaayo
Superstar Sanjay Dutt ayaa si rasmi ah ugu laaban doono shaqada maal galinta filimada wuxuuna ka bilaabi doonaa filimkiisa cusub ee aan magaca loo bixinin balse sheeko ahaan laga soo min guuriyay filimka Telugu ah Prasthanam. […]
Xaqiiqooyin U Gaar Ah Salman Khan Filmkiisa Jab Pyaar Kisise Hota Hota Hai Ee 20-ka Sano Kasoo Wareegatay!!
May 22, 2018 Ali Aadan
Jab Pyaar Kisise Hota Hai waa mid kamid ah aflaamta Salman Khan ee uu shaashada jaceyl kaga jilay waana fil guul wacan gaaray waxaana la daawaday maanta oo kale 20 sano kahor 22 May sanadkii […]
Maanta Oo Kale Waxaa La Daawaday Salman Khan Filmkiisa Jab Pyaar Kisise Hota Hai!!
Jab Pyaar Kisise Hota Hota Hai waa film jaceyl iyo shactiro isku dhex jirto ah waxaana hogaamiyaal ka ahaayen Salman Khan iyo Twinkle Khan halka ay doorar muhiim ah klahaayen jilayaasha kala ah Namrata Shirodhkar, […]
Tartamayaasha Xaflada IIFA 2018: Vidya Balan filmkeda Tumhari Sulu iyo Rajkumar Rao filmkisa Newton ayaa meelo badan tartanka kaga jiraan!
Waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay tartamayaasha xaflada bisha June la qaban doono ee International Indian Film Academy (IIFA) Awards taaso ay kasoo qeyb gali doonan jilayaal badan oo Bollywoodka katirsan kuwaaso qaar kamid […]
Shruti Haasan Oo Ravi Teja La Sameyn Doonto Filmka Amar Akbar Anthony!!
Atirishada Shruti Haasan ayaa markale la shaqeyn doonto madadaaliyaha kowaad ee koonfur India Ravi Teja kaaso ah atoore shaashada daawadyaasha kaga qosliya. Ravi Teja ayaa sameyn doono film magaciisa la shaaciyay looguna magac daray Amar […]
Taimur Ali Khan Oo Saxaafada La Falgalaya Xili Sawiro Laga Qaatay Isagoo Mumbai Wadooyinkeda Lagu Socod Siinayo (+Sawiro)
Taimur Ali Khan waa mid kamid ah caruurta baraha bulshada ugu caansan isagoo ah midka ugu taageeraha badan baraha bulshada maadama sawiradiisa inta badan shacbiyad balaaran la fal galaan. Taimur waxaa dhaleen jilayaasha kala ah […]
« 1 … 253 254 255 … 960 »